OEM Nero bamboo ziplock umququzeleli yokugcina ibhegi Manufacturer kunye Factory | Nero
Igama lemveliso: Nero bamboo ziplock ibhegi umququzeleli
Ubunzima: malunga ne-0.6 kg
Ubungakanani : 12 x 12 x 3 intshi ( L x W x H)
Umququzeleli we-bamboo yokugcina isikhwama
IBambo yoMgangatho oPhezulu:Yenziwe ngeNdalo kunye nexabiso eliphezulu iPhyllostachys pubescens,iCarbonized Phyllostachys pubescens iyaxhathisa kwi-abrasion, deformation. Umphezulu we-bamboo yipeyinti esekwe kwioyile, ingenamanzi kancinci, kulula ukuyicoca.
I-ZIPLOCK BAG ORGANIZER - Umququzeleli wethu we-baggie unokugcina iingxowa zeplastiki zokutya ezingcolileyo kwi-drawer yakho ngokwecandelo, gcina ikhitshi yakho icocekile.Lo Mphathi we-Ziplock Bag unobungakanani obufanelekileyo bokuhambelana nazo zonke iintlobo zeengxowa zokugcina ukutya ezibandakanya i-quart slider bags. Izisombululo ezigqibeleleyo zokugcina kwidrowa yakho yasekhitshini emdaka. Kungcono kakhulu kunokuba neebhokisi ezithambileyo zenza idrowa ibambeke kwaye idilike xa ubeka nantoni na kuyo.
Izinto eziVuselelwa ngokupheleleyo-Le bhokisi yokugcina ingxowa yeplastiki yenziwe nge-bamboo yendalo. Kulula ukucoca nokugcina. Njengakwindalo, umbala kunye nokuthungwa kunokwahluka ukwenza ibhokisi nganye ibe yodwa!
Ufakelo olulula-Idityaniswe ngokupheleleyo! Ungayifaka kwidrowa okanye uyixhome eludongeni ngesixhobo sethu sokuxhoma ibhonasi. Nceda uqinisekise idrowa yakho inobungakanani be-12 x 12 x 3 intshi ubuncinane.
Isipho sabaququzeleli-Eli liphupha labaququzeleli nje! Ijongeka ilungile kwaye ilungile ngephakheji entle! Olu yilo lokutshintsha ubomi luya kwenza abantu bakho obathandayo bonwabe kakhulu xa bebona idrowa yabo ayizange ilungelelaniswe kwaye icocekile ngaphambili!
Ubuchwephesha obugqwesileyo-I-dispenser nganye idityaniswe ngokuqinileyo kwaye igudiswe ngesandla ziingcali. ILaser ikrolwe iileta zeGallon, iQuart, Sandwich kunye neSnack eziya kuhlala ubomi bonke.
Ngaphambili: Indawo yesityalo esiphathwayo esinemigangatho emi-3
Okulandelayo: Nero Adjustable Bamboo Drawer izahluli